Samsung mobaayiloota dacha'aniifi S10 5G haarawaa dhiyeesse - BBC News Afaan Oromoo
Samsung mobaayiloota dacha'aniifi S10 5G haarawaa dhiyeesse
Madda suuraa, SAMSUNG
Samsung mobaayila dacha'u haarawaa the Galaxy Fold - jedhamu 5G Galaxy S10 akkasumas akaakuu Galaxy S10 biroo sadii baayyee ammayyaa'aa ta'e dhiyeessaa jira.
Inni dacha'uu danda'u yeroo eegame dursee ji'a lama keessatti gabaaf dhiyaata jedhameera.
Gosti Galaxy S10 5G jedhamu waan hedduu kan foyyaa'e waan agarsiisuuf kubbaaniyyaan mobaayila kana omishu walitti fufinsaan bilbilawwan harkaa haarawaa saffisaan hojjetaa deemuu kan agarsiisuufi bakka neetiwoorkiin jiruti ammoo baay'ee saaffisaa kan ta'edha.
Samsung omisha foyyaa'aa 'Galaxy S9' gabaaf dhiyeessuuf
Galmee mobaayilii haaraarratti qabxiilee muraasa
Gosti S10 ammoo akka moodela gatiin isaa gadi aanaa ta'utti dhiyaateera.
Samsung duraan akka hubatee turettis gatiin S9 "hanga yaadamee tureen gaditti gurguramaa ture".
Samsung akka jedhutti gosti mobaayila Galaxy dacha'uu hanga 7.3in (18.5cm) ta'utti banamuudhaan akka taabileetiitti gargaara. Akkasumas al takkaatti appilikeeshinoota sadiin hojjechuu danda'a.
Galaxy dacha'uu danda'u tajaajila hedduu al takkaatti kenna
Samsung itti dabaluun akka jedhetti appilikeeshinoonni Whatsapp, Facebook, YouTube fi Microsoft Office hundi isaanii akka bifa haaraa kanaaf ta'utti omisha haarawaa kana irrattti tajaajila isaanii ol guddisuun ni danda'ama.
Dabalataanis, dhaabbanni Kooriyaa Kibbaa kun akka jedhutti mobaayilli haarawaa kun kaameraawwan ja'a qaba.
Kaameraawwan ja'an kana keessaa sadii karaa dugda duubaa, lama karaa keessaa, tokko ammoo karaa fuula duraa yommuu ta'u akka barbaadametti yoo qabameyyu suuraa kaasuu akka danda'uuf jedhameeti.
Galaxy Dachaa akaakuun 4G ta'e Ebla 26 irraa eegalee gabaa irra kan oolu yommuu ta'u gatiin isaas $1,980 (£1,515) ta'a. Yeroo gara Birriiti jijjiiramu 60,000 ol ta'a jechuudha. Kan kana caalaa gatiin isaa cimu abbaan 5G akka gabaaf dhiyaatus ni abdatama.
Gorsaan Tarsiimoo Kalaqaa Carolina Milanesi akka jedhanitti "Mobaayiliin dachaa kun namoota bilbila fuula diriiraafi bal'aa barbaadaniif waan gaariidha".
"Tekinooloojiin hedduunis keessatti tolfameera. Gatii isaas osoo $2,000 (Birrii 60,00 gaditti ta'ee gaariidha)."
Namoonni dhimma gabaa itti dhiyeenyaan hordofan ammallee shakkii ni qabu.
"Mobaayiloonni dadacha'an baayyee bareedoodha: iskiriinii gurguddaa dizaayinii xiqqaa keessatti qabata," jechuudhaan Xiinxalaan Tarsiimoo dhaabbata qorannoo Neil Mawston yaada kennaniiru.
Omishawwan Galaxy S
Samsung akaakuuwwan S10 gara fuula duraatti gabaa irratti gurgurtaa gaarii qabatee akka turu eegama.
Samsung Galaxy S9 foyya'insa kaameraa irratti fuullefata
7 Bitooteessa 2018